सरकारी कार्यालयका हाकिम ११ लाख पैसा बोकेर होटलमा केटीसंग म’स्ती गर्न पुगेपछि …. – Enepali Samchar
सरकारी कार्यालयका हाकिम ११ लाख पैसा बोकेर होटलमा केटीसंग म’स्ती गर्न पुगेपछि ….
March 1, 2021 adminLeaveaComment on सरकारी कार्यालयका हाकिम ११ लाख पैसा बोकेर होटलमा केटीसंग म’स्ती गर्न पुगेपछि ….
e nepalisamchaaar /काठमाडौं । ठूलो रकम बोकेर युवती सहित होटलमा म’स्ती गर्न पुगेका सरकारी कार्यालयका निमित्त प्रमुख पक्राउ परेका छन् । सुन्धारास्थित ईशान होटलमा म संग ११ लाख रुपैया छ भन्दै ाफैले ह ल्ला गरेपछि कसैले सुटुक्क प्रहरीलाई फोन गरिदिएको थियो । यो पैसा महानिर्देशकलाई दिने हो भन्दै महाकाली सिँचाई आयोजनाका निमित्त प्रमुख प्रचण्डदेव विष्ट ह ल्ला गरिरहेका थिए । उनीसंग एक जना युवती पनि थिइन् ।
यस्तो ह ल्ला गरेपछि होटलवाटै कसैले प्रहरीलाई फोन गरिदिए । तत्काल पुगेको प्रहरीले उनीसंग रहेकी युवती र श्रोत नखुलेको ११ लाख रुपैया सहित पक्राउ गरेको छ । बुधवार मध्यराती होटलमा म संग ११ लाख छ भन्दै ह ल्ला गर्दा सरकारी कार्यालयका हाकिम यसरी अप्ठेरोमा परेका छन् ।
बरामद गरिएको ११ लाखसहित उनलाई प्रहरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा बुझाएको छ । दार्चुला घर भएका ५१ वर्षीय प्रचण्डदेव विष्टलाई नियन्त्रणमा लिईएको पुष्टि गर्दै अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) तारानाथ अधिकारीले भने घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । उनले ११ लाख रुपैयाको श्रोत अहिले सम्म नखलेको बताएका छन् ।
यी ३ महिनामा जन्मने मानिस हुने गर्दछन् सबैभन्दा रोमान्टिक, तपाईको कुन हो ?
प्रचण्डको उद्घोष: यी त सुरुबात हुन, हेर्दै जानुस कसरी देश पुरै माओवादीमय हुनेछ, त्यो समय टाढा छैन
वि.सं. २०७७ साल फाल्गुन ०९ गते । आइतबारको राशिफल कस्को भाग्य कस्तो हेर्नुहोस् ।